माधव गुट छँदै थियो, फेरि प्रचण्ड गुट ? दुईवटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ : केपी ओली - Himali Patrika
माधव गुट छँदै थियो, फेरि प्रचण्ड गुट ? दुईवटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ : केपी ओली
हिमाली पत्रिका १५ पुष २०७७, 7:45 pm
काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको पक्षमा बहुमत रहेको स्वीकार गरेका छन् । बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा आफ्नो समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ता सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकारेका हुन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाउने क्रममा ओलीले बहुमतको दुरुपयोग भएको बताए । ‘पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र ? माधव गुट छ । फेरि प्रचण्ड गुट । उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि, दुईवटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन र ?’, ओलीले भने ।
प्रचण्ड र माधव मिल्दा बहुमत पुग्ने पहिले नै बुझेको बताउँदै ओलीले भने, ‘५५/५६ वर्ष राजनीति गरेको, ५० वर्ष अगाडि नयाँ अभियान, नयाँ आन्दोलन थालेर आएको मान्छेलाई यतिका तिकडम ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता, संविधान कार्यान्वयन र स्थायित्वका लागि आफूले बहुमत संख्या दिएको बताए । ‘उहाँहरुलाई मैले दिएको त्यो संख्या, एकताका लागि दिइएको थियो । एकीकरणका लागि दिइएको थियो । यो देश बनाउनका लागि दिइएको थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिइएको थियो । स्थायित्वका लागि दिइएको थियो । देश अगाडि बढाउनका लागि दिइएको थियो । तर, उहाँहरुले त्यो बहुमत आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो’, ओलीको निष्कर्ष छ । अर्थात्, उनले प्रचण्ड र माधव माथि आरोप लगाउने क्रममा आफ्नो अल्पमत पनि स्वीकारे ।
ओली समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले ४४१ जसरी मनोनित भएका थिए, त्यसरी नै ११९९ केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएकाले प्रचण्ड–माधव अल्पमतमा रहेको बताएका थिए । सँगै थापाले निर्वाचन चिन्हलाई प्राविधिक विषय भएकाले त्यसमा अल्मलिन नहुने तर्क गरे । निर्वाचन चिन्ह ठूलो कुरा नभएको सन्दर्भलाई पुष्टि गर्न २०६४ को निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह हुँदा पनि नेकपा एमाले पराजित भएको थापाले बताए ।